नेतासँग रमाएनन् नायिका – रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ जेष्ठ ३२ गते प्रकाशित, l ११:५८
जेठ ३२, काठमाण्डौ । रेखा थापा राजनीतिमा आएर प्रचण्डलाई बीच सडकमा नचाइन् । रेखाले प्रचण्डलाई नचाउन सक्नु सामान्य घटना थिएन । यसलाई कतिपयले रेखा अब राजनीतिमा छाउछिन् भन्न थाले ।
सिनेमा क्षेत्रमो राजनीतिकी चतुर खेलाडी रेखाले राजनीतिमा समेत बाजी मार्ने झलक देखाइसकेकी थिइन् । उनी तत्कालिन माओवादी पार्टीभित्र बलियो बन्ने सम्भावना थियो । तर, रेखाले धैर्यता गुमाइन् । माओवादी कमजोर भएलगत्तै पार्टी परित्याग गरिन् ।
रेखा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरिन् । उक्त दलको चुनाव पनि जितिन् । कम्युनिष्ट पार्टीबाट राजावादी दलमा प्रवेश ! वैचारिक राजनीतिमा विरलै हुने घटना थियो । तर, सिनेमाकी नायिकाका लागि यो हदसम्मको परिवर्तनलाई लचकता भनेर टारिन्छ । रेखाले टारिदिइन् ।
अहिले रेखा राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । कुनैबेला प्रचण्डसँग नजिकिएकी उनी कमल थापासँग उत्तिकै नजिक भइसकेकी थिइन् । तर, दुवैसँगको निकटता लामो टिक्न सकेन ।
कोमल वलीले लामो समययताको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगको सम्बन्ध एकाएक तोडिन् । कमल थापासँग नजिक वलीले उक्त दलको चुनावमा समेत भाग लिएर सर्वाधिक मत ल्याएकी थिइन् । तर, राप्रपा छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरिन् ।
वली भएकीले केपी शर्मा ओलीसँग उनको निकटता छ । ओलीकै पहलमा राष्ट्रिय सभा सांसद छिन् । विगतमा राजा वीरेन्द्र देखि ज्ञानेन्द्र समेत उनको आवाजको प्रशंशक थिए । आवाजकी धनी भएकैले सत्तासँग निकटता बनाउन सकिन् । तर, कोमल वली राजनीतिमा अस्थिर छिन् । उनले कुनै समयमा नेकपा छाडेमा आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
करिश्मा मानन्धर राजनीतिमा जोसका साथ आइन् । डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमा संस्थापक सदस्य बनिन् । करिश्माले बाबुरामसँगको निकटता तोडिइसकेकी छिन् । उनले यसो किन गरिन् ? अझै खुलस्त हुन सकेको छैन । उनी बाबुराम नेतृत्वको पार्टीमा रमाउन सकिनन् ।
विदेशमा सफल यहाँ किन असफल
कतिपय मुलुकमा कलाकार राजनीतिमा प्रभावशाली छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा हिमामालिनी सदावहार नायिका मात्र होइनन् नेता समेत बन्न सफल भइन् । उनले भारतीय जनता पार्टीबाट चुनाव लडेर मथुराबाट जित हासिल गरिन् ।
तामिल चलचित्रकी चर्चित नायिका जयललिता राजनीतिमा आएर सनसनी मच्चाइन् । तामिलनाडुको मुख्यमन्त्री हुँदै उनको निधन भएको थियो । स्मृति इरानीले मोदीको मन जित्न सकेकीले दुई पटक मन्त्री पाइन् । उनले यसपटकको चुनावमा राहुल गान्धीलाई पराजित गरिन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङकी पत्नी पेङ लिउयान लोकप्रीय लोकगायिका हुन् । जिङपिङले पेङको क्षमता र सुन्दरताबाट आकर्षित भएर निकट हुँदै विवाह सम्म पुगेका थिए ।
२०७६ जेष्ठ ३२ गते सम्पादित l ११:५९